राती घरमै सुतेकी छोरी बिहान उठेर बिस्तारमा गएर हेर्दा….. (भिडियोसहित) – Namaste Host
राती घरमै सुतेकी छोरी बिहान उठेर बिस्तारमा गएर हेर्दा….. (भिडियोसहित)
February 28, 2021 Bijay LamaLeaveaComment on राती घरमै सुतेकी छोरी बिहान उठेर बिस्तारमा गएर हेर्दा….. (भिडियोसहित)
चितवन । आफैसंग सुतेकी छोरी बिहान उठ्दा ओच्छ्यानमा नहुँदा आमाको रोएर बेहाल भएको छ । छोरी दिव्या कुमाल वर्षले २१ लागेकी छन् । उनी आजभन्दा ४ महिना पहिला आफ्नो घरमा परिवारसंगै बसेर रातीको ११ बजेसम्म टिभी हेरेर सुतेकी थिईन् । बिहान उनकी आमा उठ्दा दिव्या भने आफ्नो ओच्छ्यान नभएको आमाको भनाई छ । यो घटना हो चितवन देवनगरको ।
चितवनको देवनगरमा आजभन्दा ४ महिना अघि परिवारसंग संगै खाना खाएर संगै टिभी हेरेर सुतेकी दिव्या कुमाल बिहान ओच्छ्यानबाट गा ए ब भएकी छन् । दिव्यालाई उनको बिस्तारामा नभेटाउँदा उनकी आमा र परिवारका अन्य सदस्यहरुलाई बाहीर कतै गएकी होली भन्ने लागेको रहेछ । तर जब बिस्तारै दिन उदाउँदै आयो रपनि दिब्या घरमा आईनन् तब भने उनीहरुमा ड रको भावना जाग्न थालेछ । पुरै दिन दिव्या घरमा नआएपछि परिवार र आफन्तले दिव्याको व्यापक खोजी गरेछन् ।
त्यसरी खोज्ने क्रममा दिव्याकी आमा र परिवारका अन्य सदस्यहरुले दिव्यालाई कसैले केही गरेकी भनेर ड रले प्रहरी कार्यालयमा हराएको सूचना पनि दिएछन् । उनका सबै साथीभाई, नजिकैका आफन्त सबै ठाउँहरुमा दिव्यालाई खोजेको आज पुरै ४ महिना भएको छ । तरपनि दिव्याको भने अत्तोपत्तो छैन । प्रहरीले पत्ता लगाईदेला भन्दै कुरेको ४ महिना बितेपछि प्रहरीबाट कुनै सहयोग नपाएका दिव्याका परिवारले अन्ततः मिडियासंग सहयोगको अपेक्षा गरेका छन् ।
दिव्याकी आमा भन्छिन्,‘रातीसंगै सुतेकी छोरी बिहान उठ्दा ओच्छ्यानमा नहुँदा र आज ४ महिनासम्म उस्को बाटो हेर्दाको पि डा केवल हामीलाई मात्र थाहा छ । हामीले प्रहरीको साहारामा छोरीको बाटो हेरेको पनि ४ महिना बितेको छ ।
अब प्रहरीले केही गर्न सक्दैन भन्ने लागेर नै मिडिया सामू आएका हौं ।’ आमाले भनिन्,‘बिहे गरेर अरुसंग गएकै भएपनि कमसेकम हामीलाई बिहे गरेर गईछ भन्ने त हुन्थ्यो । त्योपनि भएन । फोन छैन । कहाँ जाउँ खोज्नलाई ? के गरुँ ?’ रुँदै आफ्नी जवना छोरी हराएको कुरा दिव्याकी आमाले यसरी सुनाईन् । भिडियोसहित
सकुन्तला कुमाल । चितवनको देवनगर । २१ वर्षकी छोरी दिव्या कुमाल हराईन् । राती ११ बजेसम्म टिभी हेरेर बसेकी छोरी संगै सुतेकी थिईन् । बिहान ४ बजे आमा उठ्दा छोरी बिस्तारमा छैनन् ।
हिरासतमा भएका बिनयजंगको मोबाइल खोलेर हेर्दा जे देख्यो प्रहरीले……..
फोनमा हेल्लो भन्ने शब्दको सुरुवात यसरी भएको रहेछ, थाहा पाएपछि तपाईँपनि दंग पर्नु हुनेछ
June 11, 2021 Bijay Lama
नेपालमा भेटियो यस्तो अचम्म को गुफा गाईले पत्ता लगायो ,दर्शन गर्न सुतेरै पस्न र निस्कनुपर्ने पूरा पढेर ॐ लेखी शेर गरौ
March 5, 2021 Bijay Lama
जुम्ल्याहा दिदीबहिनीले जन्माए एक घण्टाको फरकमा छोरी, पार्यो सबैलाई चकित !
March 7, 2021 Bijay Lama
कक्षा कोठा भित्र नै शिक्षक र छात्रा यस्तो ह,र्कत गर्दै गरेको अवस्थामा भेटीए ! September 11, 2021
सङ्खुवासभा घटनाका आरोपी भतिजा पक्राउ September 11, 2021
ऋण लागेर दाङ देखि विदेश जान हिंडेका श्रीमान काठमाडौं आएर श्रीमतीको फेसबुकको प्रोफाइल खोलेर हेर्दा जे देखे, भैदिए भूमिगत (भिडियो) September 11, 2021
ललितपुरको यो ठाउमा छानीछानी युवती, एकपटककाे तीनदेखि १५ हजार September 11, 2021
बिहे भोजमा मा`सु नदिएको भन्दै झ`डप, १ को मृ त्यु ३ जना घा’इते September 11, 2021